के तपाईंलाई जाडोमा सताउँछ दमले ? | Safal Khabar
के तपाईंलाई जाडोमा सताउँछ दमले ?
शनिबार, २८ मंसिर २०७६, १९ : ५५
काठमाडौँ । दम, स्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या हो । दम रोगीलाई श्वास फेर्नमा कठिनाई हुने गर्छ । कतिसम्म भने, सामान्य हिँडडुल गर्दा पनि सास बढ्छ । घ्यारघ्यार हुने, छाति दुख्ने र खोकीको समस्या पनि हुन्छ । यस्तो समस्या बृद्धबृद्धालाई मात्र होइन, साना बच्चालाई समेत हुन्छ ।
दमका रोगीहरुका लागि ताजा र हरियो पत्तेदार सागसब्जी एकदमै लाभदायक हुन्छन् । यसमा अत्यधिक मात्रामा भिटामिन्स र प्mलेवोनाइड्स हुन्छ जसले शरीरमा मुक्त कणहरुलाई नष्ट गरिदिन्छ । यी मुक्त कण शरीरमा पाइने टक्सिस हुन्छन् जसले दमलाई अझै बढाउन सक्छ ।
वाइनमा सल्फाइट्स नामक प्रिजर्भेटिभ हुन्छ जसले गर्दा दमले आक्रमण गर्न सक्छ । यद्यपि दमका रोगीले वाइन सेवन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा प्रष्ट राय पाइदैन । यसको परिणाम स्पष्ट देखिएको छैन । परन्तु दमका रोगीले वाइन नपिएकै राम्रो ।